उद्यमी महिला जोन्टा इन्टरनेसनलमा - Samadhan News
उद्यमी महिला जोन्टा इन्टरनेसनलमा
समाधान संवाददाता २०७६ असार २३ गते १२:५७
अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सामाजिक संस्था जोन्टा इन्टरनेसनलको शाखा पोखरामा विस्तार भएको छ । पोखराका उद्यमी महिलाको सहभागितामा संस्था स्थापनाको घोषणा भएको हो । उद्यमी लीना श्रेष्ठ गोशलीको अध्यक्षतामा ९ सदस्य कार्यसमिति गठन गर्दै जोन्टा सुरुआत भएको छ । समिति उपाध्यक्ष मोनिका थापा, महासचिव रोजिना रञ्जित बिजुक्छे, कोषाध्यक्ष नम्रता दाहाल थापा चयन भएका छन् । निर्देशकमा विद्या आर कायस्थ, नेलिशा ठकुरी केसी, मिलन थापा, प्रशंसा कुँवर केसी र अन्जना तझ्या छन् ।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले महिलाहरु आफ्नै बलबुँतामा अगाडि बढ्नु प्रशंसनीय भएको बताए । उनले महिलाले नै महिलाको पिर मर्का बुझ्न सक्ने हुँदा संस्थाले सेवा र महिला सशक्तिकरणमा जोड दिए ।
नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीका अध्यक्ष दीपेन्द्र श्रेष्ठले पोखराका प्रतिष्ठित उद्यमी महिलाको पहलमा यस क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय क्लब ढिलो गरी स्थापना भए पनि गुणस्तरीय सेवाका लागि छलाङ मार्न सक्नु पर्नेमा जोड दिए । क्लबले महिला सशक्तिकरणको क्षेत्रमा सेवा र समर्थनद्वारा समान हक र महिला हितका लागि आवाज उठाउँदै आएको छ । महिला अधिकार पनि मानव अधिकार हो भन्ने नारा बोकेको क्लबका अध्यक्ष लीना श्रेष्ठ गोशलीले बताइन् ।
कार्यक्रममा जोन्टा इन्टरनेसनल डिस्ट्रिक २५ का गर्भनर सहनाज नथानी, जोन्टा क्लब अफ काठमाडौंका अध्यक्ष मीरा ज्योती, एरिया २ का निर्देशक सिर्जना राना लगायतले बोलेका थिए । क्लबको आचारसंहिताका बारेमा उपाध्यक्ष मोनिका थापाले प्रकाश पारेकी थिइन् । महासचिव रोजिना रञ्जित बिजुक्छेले अन्तर्राष्ट्रिय अध्यक्षबाट प्राप्त बधाइ सन्देश सुनाएकी थिइन् ।
क्लबका पदाधिकारी तथा सदस्यलाई जोन्टा इन्टरनेसनल डिस्ट्रिक २५ का गर्भनर सहनाज नथानीले सपथ गराएका थिए । संस्थाका सदस्यमा संगीता बज्राचार्य, पद्मा बास्तोला, अनिता खड्का भट्टराई, सिर्जना कार्की भट्टराई, सम्झना श्रेष्ठ बुद्धाचार्य, रीताशोभा गुरुङ, डा. मेरिना ज्ञवाली, दीक्षा राना हमाल, सुजाता कायस्थ जोशी छन् ।
क्लबमा रश्मी राजभण्डारी पालिखे, डा. अंगना पराजुली, श्वेता पिया मल्ल, सुनीता राज्यलक्ष्मी राणा, पुजा गौचन शेरचन, पलिना श्रेष्ठ, प्रिती प्रधान श्रेष्ठ र सविता श्रेष्ठ छन् । विभिन्न उद्यम तथा व्यवसायमा स्थापित २७ जना महिलाले अगुवाइमा सामाजिक संस्थामार्फत् महिला सशक्तिकरण र सेवाका लागि जुट्न लागेको संस्थाका महासचिव रोजिना रञ्जित बिजुक्छेले जानकारी दिइन् ।
अमेरिकामा स्थापना भएको अन्तर्राष्ट्रिय क्लबको सञ्जाल संसारभर ६७ देशमा फैलिएको छ । १३ हजार सदस्य रहेको क्लब नेपालमा ५ वर्ष अघि भित्रिएको हो । जोन्टा क्लब काठमाडाैं स्थापनासँगै नेपालमा प्रवेश पाएको हो । नेपालमा क्लबको स्थापनासँगै महिला हक अधिकारको पक्षमा तथा महिला हिंसा विरुद्द विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।